शहीदहरुप्रति समर्पित गर्दै प्रमोद खरेलले ल्याए ‘शहीद’ गीति एल्बम (भिडियो सहित )
काठमाडौं । माघ १६ गते सहिद दिवसको रुपमा मनाउँदै आइएको थियो । भोलि बुधबारबाट सहिद सप्ताह पनि मनाउने चलन केही समय चल्दै आएको पनि थियो ।
देशमा विभिन्न समयमा शासनसत्ता फेरिँदै आयो, शहीदहरुको अपमान पनि हुँदै गयो । शहीदका नाममा कसलाई, कस्तोलाई र केका लागि भन्ने कुरामा विवाद हुँदै गयो । राजनीतिकरणमा शहीदको अर्थलाई विनाअर्थ शहीद बनाउँदै आइएको पछिल्लो समयलाई गायक प्रमोद खरेलको ‘शहीद’ गीतले यथार्थपूर्ण पाठ सिकाएको छ ।
कुनै समय राणा शासनविरुद्ध लडेका, प्रजातन्त्रका खातिर लडेका वीर सपूतहरुको नाममा मनाउँदै आइएको शहीद दिवसलाई पछिल्लो समय राजनीतिकरण गरिँदै जाँदा देशका वास्तविक शहीदहरुप्रति अपमान भएको प्रष्ट छ । शहीद दिवसको अर्थमा गायक प्रमोद खरेलले आफ्नै शब्द, संगीत र स्वरमा गीतबाट एउटा शहीदको अर्थमा देशको यथार्थ पस्किएका छन् ।
देशका लागि प्राण बलिदान गर्ने ज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रति समर्पित गर्दै गायक खरेलले गीत सार्वजनिक गरेका हुन् । फणिन्द्र राईको संगीत संयोजनमा रहेको यो गीतको कार्टुन भिडियो निर्माण गरिएको छ । भिडियोलाई प्रविन श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका छन् ।
भिडियोमा गरिएको पेन्टिङ आर्ट भने रोहन गुरुङको रहेको छ । भिडियोमा गिटारमा सुदिप सागर देखिएका छन् भने गायक खरेल आफैं प्रस्तुत भएका छन् ।
#action=share">भिडियो हेर्नको लागि यँहा क्लीक गर्नुहोस
मेरै रगतले देशै भिजेथ्यो
म शहिद भएँ रे आमा
म शहिद भएको धेरै भयो
मेरो देश उस्तै छ रे आमा
मंगलग्रहमा नेपाल बनाउन कसले पो भन्याथ्यो र ?
सुनै सुनको छानो सजाउन कसले पो माग्याथ्यो र ?
यहाँ भोको पेटलाई खान देऊ
यहाँ नाङ्गो शरीरलाई ढाकिदेऊ
मेरै रगतले संसार भिज्याथ्यो
म महान भएँ रे आमा
म महान भएको धेरै भयो
मर्नेहरु फेरि फर्कंदैनन् बाँच्नेहरु बोल्दैनन्
तिम्ले झण्डा ओढाई आगो लगाउँदा सपना साकार हुँदैनन्
उदाङ्गो झुपडीमा छानो देऊ
यहाँ पाइला अड्याउने माटो देऊ
मेरो अन्तिम सासले देह छोडेथ्यो
म शालिक भएँ रे आमा
म शालिक भएको धेरै भयो
साभार म्युजिक खबर बाट